7 Klọb Jazz kacha mma na NYC - Ntụrụndụ
Ejiji Agbamakwụkwọ Diy Ibu Ibu Olee Otú Iji Nri Ngwa Ihe Ndozi Nyocha Nyocha Mma Ndị Nweta
7 Ezigbo klọb Jazz na NYC
N’abalị ọ bụla, a na-eme ọtụtụ egwu na obodo. Mana mgbe ọ masịrị anyị ịnụ ụtọ egwu dị egwu, New York vibes mara mma na * ahem * na-ekwe nkwa ịnọdụ ala n'otu oge, naanị ụlọ ịgba egwu jazz ga-eme. Ọ bụ ezie na e mepụtaghị jazz ebe a (New Orleans nwere nsọpụrụ ahụ), NYC ghọrọ ebe maka ụdị a na 1920s, na-eweta ụdị ọhụụ dịka bebop na aha ndị isi, site na Duke Ellington ruo Charlie Parker na Ella Fitzgerald. Ma hey, nke a abụghị ihe mmụta akụkọ ihe mere eme-obodo jazz ahụ dị ndụ ma dịkwa mma. Hụ onwe gị na ntụpọ asaa a.
Ruo ihe karịrị afọ 35, Blue Note bụ otu n'ime ebe kachasị elu iji gee akụkọ ntolite jazz na ndị na-abịa. N'ịbụ nke dị na Greenwich Village, ebe a mara mma (ma ee, acha anụnụ anụnụ) ahụwo mmasị nke Tony Bennett, Stevie Wonder, Ray Charles, Dave Brubeck, Chick Corea na ọtụtụ ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ha na-akwụsị na mberede — ị maghị onye ị ga-ahụ n'abalị ọ bụla. Na iji egwu ụbọchị asaa n'izu na etiti abalị na-egosi na ngwụsị izu, ị ga-enwe ọtụtụ ohere.
131 W. Nke atọ St.; bluenotejazz.com
ịkpụ ntutu maka ntutu ogologo wavy ogologo ihu oval
Kedu ihe ị ga-enweta mgbe ị jikọtara ndị na-egwu egwu na onye isi nri na onye na-azụ ihe oriri Danny Meyer? Jazz Standard, ebe egwu na-eje ozi anwuru ọkụ Blue Anwuru na nnukwu egwu n'abalị. N'ezie, e dekọtara ọtụtụ ọba egwu Grammy na ntanetị. Ya mere, danye n'ime efere nku nke nwere mmachi. Nweghị ike imehie mgbe anya gị masịrị gị.
116 E. 27th Abụọ.; jazzstandard.com
Site n'ikike nke Carlyle, ụlọ nkwari akụ Rosewood
Bemelmens Ogwe & Cafe Carlyle
Egwú na-agba n'ime mgbidi nke Carlyle: Onye izizi izizi ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ nke ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ nke Upper East Side bụ Richard Rodgers (otu ọkara nke Rodgers na Hammerstein… yeah, na Broadway duo), na kemgbe mmalite ya, ụlọ oriri na nkwari akụ ahụ bụ ebe ndị na-egwu egwu na ndị na-agụ egwú na-aga. Ihe onwunwe ahụ nwere ebe abụọ dị iche iche maka egwu dị egwu: Bemelmens Bar, bụ onye ama ama maka Manhattans na-enweghị ntụpọ na akara ngosi mara mma site na onye na-ese ihe n'azụ Madeline akwụkwọ, na Cafe Carlyle, ụlọ oriri na ọ whiteụ whiteụ na-acha ọcha na-acha ọcha na-akwado ọrụ ndị a ma ama dịka Alan Cummings, Rita Wilson na Eddy Davis New Orleans jazz band. Ọ bụ ezie na nke ikpeazụ ahụ, ebe a na-emebe iwu dị mma maka oge pụrụ iche-ọ dị ka ọ dabara na ihe nkiri - anyị na-ahọrọ ịba ụba na mmanya granite na Bemelmens maka mmanya na-adịghị mma na ụfọdụ ndị jazz pianists dị egwu. (Daashi: Enweghị mkpuchi tupu 9:30 pm)
35 E. 76th St.; rosewoodhotels.com
Tenor saxophonist na nwa amaala Harlem bụ Bill Saxton na-eduga ndị otu mgbede ahụ na ngwụcha izu ụka na bebop a na-akpọ bebop speakeasy na okpuru ala nke brownstone. Maka naanị $ 20, jazz aficionados na-alaghachi n'oge maka mgbede nke ntụrụndụ dị ndụ ebe naanị ihe dị na ya bụ egwu. Kachasị: Ọ na - adị gị ka ị nọ ọdụ n'ime ime ụlọ ya, nke na - eme ka ahụmịhe ahụ dịkwuo nso. (Mara: Achọrọ ndoputa.)
148 W. 133rd St..; ikwanyere.com
Ginny''s Nri Anyasị Club / Facebook
Ginny''s Nri abalị
Ihe kariri otu onye isi amara amara na NYC abanyela n’ime ihe jazz. Marcus Samuelsson si ode na Southern mkpụrụ obi na-esi nri, Red Rooster Harlem, nwere ebe egwu egwu dị ala ebe ndị agha jazz na-ewere ọnọdụ na Tọzdee site na abalị Satọde. Yabirbird ya a ma ama dị na menu, dị ka usoro nke ụfọdụ nnukwu ọrụ obodo na nke mba, nke sitere na ụda akụkọ agbata obi. Maka ezigbo ọgwụgwọ, lelee Sunday Gospel brunch, na-egosipụta ndị otu egwu Harlem dị na mpaghara.
310 Lenox Ekele.; ginnyssupperclub.com
A post nke Felipe Steffen kesara (@ccabecaoo) na Aug 11, 2018 na 5: 11 pm PDT
May nwere ike ịma ebe a maka shuffleboard na ping pong, mana ndị egwu ahụ na-arụ n'akụkụ bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị mma (gbakwunyere na ha na-adịkarị ka ha na-agba agba). Ndị na-eto eto na-egwu egwu, ụmụ akwụkwọ Juilliard na Broadway pros na ụbọchị ezumike ha gosipụtara ọgbaghara, na-anwale ma soro ndị enyi ha kporie ndụ, nke bụ ihe kpatara ị ga-eji kwụsị ebe a n'abalị maka nnọkọ jam na biya.
75 Christopher St.; fatcatmusic.org
Jazz na Lincoln Center
Nkuzi uche nke opi Wynton Marsalis (onye egwu izizi nke ritere Pulitzer Prize maka ihe jazz, NBD), Jazz na Lincoln Center bụ otu n'ime ebe kachasị aga maka egwu dị na obodo. Akụkụ nke Lincoln Center, ebe a na-anabata ọtụtụ ebe na-egosi kwa abalị yana ụfọdụ ndị kachasị aha azụmaahịa yana ndị otu ụlọ, nke Marsalis duziri. Jidere ihe ọ drinkụ drinkụ na mmanya ma dọpụta oche maka abalị dị egwu nke egwu na-enwu ọkụ nke Columbus Circle dị ka azụ. Ego na-akwado ihe ngosi ahụ pụtara inyeghachi: Marsalis ’nonprofit na-akwado ọtụtụ mmemme nka, gụnyere agụmakwụkwọ jazz maka ụmụaka.
10 Columbus gburugburu; jazz.org
mkpịsị aka nri maka ụmụaka
Njikọ : 8 Underrated NYC Museums Need Kwesịrị Ileta ASAP
Categories Ga-Ahụ Nddị Rentzụ Ụmụ
wepụ ntutu ihu na ụlọ kpamkpam
amazon kacha ọhụrụ ihe nkiri 2018
esi ida tummy abụba omume
ịhapụ onye ị hụrụ n’anya
www nkiri 7 com